Fiverenana & fifanakalozana: 45 andro hiverenana na fifanakalozana - jiro MediaLight Bias
Fiverenana & fifanakalozana: 45 andro hiverenana na hatakalo
Raha sendra olana amin'ny MediaLight ianao, ny olana rehetra azo eritreretina dia voarakotra ao ambaninay feno 5 taona Warranty. Na izany aza, angamba tsy fantatrao izay nanafatra anao na naverinao ny fahitalavitrao ary tsy mila ny MediaLight intsony ianao.
Tsy mila antony hamerenana ny MediaLight ianao handoavana ny volanao, ary tsy misy sarany famerenana amin'ny laoniny, na izany aza, indraindray dia esorinay ho an'ny entana tsy hita na raha maro ny entana ampiasaina ary miverina amin'ny toe-javatra tsy azo ampiasaina (Azafady mba mifandraisa aminay mba hahalalana vaovao fa tsy manandrana habe marobe!) Ireo sarany ireo dia voatanisa ao amin'ny faran'ity pejy ity.
Tsy mila manome antony hiverenana ianao, fa raha manao izany:
1) Mety hanafainganana ny famerenam-bola ianao satria mamonjy fotoana kely
2) Azonao atao ny mamela anay hamaha ny olanao raha toa ka vokatry ny tsy fetezana na ny fametrahana azy ny fiverenana
Azafady mba mifandraisa aminay mba hahazo isa nomen'ny fahazoan-dàlana miverina (RMA) hanoratra amin'ny fonosana. Ny fiverenana tsy nahazoana alàlana raha tsy misy RMA dia mety ho sarotra ny mampifanaraka amin'ny baiko iray, ka miteraka ny fahaverezan'ny entana sy ny famerenam-bola azonao. Tsy azo averina ny fandefasana.
Mifanaraka amin'ny fenitry ny indostria, ny kapila Blu-ray sy ny haino aman-jery fonosana, rehefa nosokafana dia tsy azo ekena amin'ny famerenam-bola. Toy izany koa, ny fampidinana dia tsy mendrika amin'ny famerenam-bola. Discs misy simba na simba dia foana azo takalo.
Raha misy singa tsy hita, na tafahoatra sy / na fanahy iniana fahasimbana amin'ny vokarinay, zonay ny zonay hampihenana ny saram-pandefasana indray ka hatramin'ny 100% amin'ny sandan'ny vokatra naverina. (Misy lisitra feno an'ireo singa tsy hita sy ny sarany fandoavana ny saram-pananana fanampiny eto ambany eto amin'ity pejy ity).
Raha misy unité averina tsy ampiasaina na tsy nosokafana dia tsy misy ny haba aloa. Mangataha fotsiny RMA-U (RMA ho an'ny entana tsy nosokafana) dia avereno.
Azafady, alao antoka fa mampiasa fomba iray miaraka amin'ny fanarahan-dia ianao, ary arovy tsara ao anaty mpandefa azy ilay entana. Tsy hamerina famerenam-bola izahay raha tsy voaray ny entana na "latsaka" amin'ny fonosany. Aza mipetaka marika fotsiny amin'ny fonosana MediaLight na LX1 misokatra.
Raha tsy azonao antoka ny tianao hampiasana na hampiorina maharitra ny jiro dia aza esorina ny lamosina mena ary aza manapaka ny tadiny. Mampiasà masking tape na kasety adhesive vetivety hitsapana ny fametrahana alohan'ny hanaovana adidy. Tsy handoa sarany izahay raha esorinao ny jiro amin'ny fahitalavitra, fa manolo-tena hampihena ny fako izahay.
Ny saram-pandefasana entana fanampiny ho an'ireo singa tsy hita na simbain'ny mpanjifa (ireo fiampangana ireo dia miampy ny sarany famerenana sy fampifanarahana ny vidinay amin'ireto entana ireto rehefa amidy tsirairay):
Fanaraha-maso lavitra sy / na dimmer: $ 10
.5m na extension 4ft: $ 5
MediaLight Strip: Tsy misy famerenam-bola raha tsy averina
Fanaka jiro amin'ny birao: $ 8
Tsy misy ny fizarana hazavana MediaLight sy LX1 tsy hita: Prorated, miorina amin'ny vidin'ny fividianana.